Umgangatho oPhezulu oLungileyo wokuvula umngxuma owenziwe ngamaplanga Umsasazi kunye neNkonzo | Jiali
I-alloy ephuculweyo ivuliwe:
I-alloy blade yandisiwe; intloko yomsiki icolile; i-shank icutshungulwa yi-grinder echanekileyo; I-shank engqukuva yi-8-10mm.
1. Isibambo esijikelezileyo sinokuhlukahluka okubanzi, ububanzi buphakathi kwe-8-10MM.
2. Isibambo siphantsi kakuhle, kunye nokugxila okuphezulu.
3. Yenziwe nge-alloy ekumgangatho ophezulu kunye ne-CNC angled processing.
4. Incakuba yandisiwe kwaye ijiyile, ebukhali ngokugqithisileyo.
Uluhlu olubanzi lokuvuleka: olubukhali, oluhlala luhlala kwaye lusebenza kakuhle
Ilula kodwa ayilula, kunye nokuvuleka okubukhali, ukususwa kwe-chip egudileyo, ehlala ixesha elide kwaye iyafikeleleka
Inokufakwa kwii-drill zezandla eziqhelekileyo, ii-drill ezitshajwayo, ii-bench drills, i-percussion drills, i-flat drill kunye nabanye oomatshini, kunye ne-chuck ye-drill machine ingasetyenziselwa uluhlu lwe-clamping ye-10 mm nangaphezulu.
ukuvulwa okugudileyo, ama-burrs amancinci, ubukhali kunye nokuqina, ingxolo ephantsi yokusebenza, liqabane elifanelekileyo labo abathanda ukwenza amaplanga! Ukusetyenziswa kwe-alloy engqindilili kakhulu-nzima njengoko iblade yenza ukuba i-blade ibe bukhali kwaye yomelele. Intloko yomatshini womatshini wamkela uyilo olugobileyo, oluluncedo ekususweni kwetshiphu kunye nokusebenza okuphezulu kokugqobhoza.
Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nomgangatho ophezulu wolawulo oluphezulu kuzo zonke izigaba zesizukulwana sisenza ukuba siqinisekise ulwaneliseko lomthengi olupheleleyo lweChinese Professional China Hole Opener / Piling Drill Bit / Big Diameter Bit, Siyawuxabisa umbuzo wakho, Ukuze ufumane iinkcukacha ezongezelelweyo, qiniseka ukuba uyayenza. qhagamshelana nathi, siya kukuphendula ngokukhawuleza!
Ubuchwephesha baseTshayina be-DTH Bits, i-Hole Opener Bit, Bonke abasebenzi basefektri, ivenkile, kunye neofisi bayasokola kwinjongo enye yokubonelela umgangatho kunye nenkonzo engcono. Ishishini lokwenyani kukufumana win-win imeko. Singathanda ukunikezela ngenkxaso eyongezelelekileyo kubathengi. Wamkelekile bonke abathengi abalungileyo ukunxibelelana nathi ngeenkcukacha zezinto zethu!
Sikholelwa: Ukusungula izinto ezintsha ngumphefumlo nomoya wethu. Okugqwesileyo kubomi bethu. Umthengi kufuneka abe nguThixo wethu ukuhanjiswa ngokukhawuleza kweChina kwiSite sokuFakelo loVavanyo loMtshini weLog Push Table Saw Small Professional Production Roundwood Woodworking Mechanical Table Saw Fabrication Plate, Umgaqo weshishini lethu uya kuba kukunika iimveliso ezikumgangatho ophezulu, umboneleli oyingcali, kwaye unxibelelwano oluthembekileyo. Wamkelekile bonke abahlobo bakho ukuba bazame ukufumana uqhagamshelo lweshishini lexesha elide.
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kwe-China kwi-Site yokuFakelo loVavanyo lweSawing Machine, iLog Push Table yabona iTable Mechanical Small Table Saw, Siye saba liqabane lakho elithembekileyo kwiimarike zamazwe ngamazwe zezisombululo zethu. Sigxila ekuboneleleni ngenkonzo kubaxumi bethu njengento ephambili ekomelezeni ubudlelwane bethu bexesha elide. Ubukho obuqhubekayo beemveliso zodidi oluphezulu zidityaniswe nenkonzo yethu ebalaseleyo yaphambi nasemva kokuthengisa kuqinisekisa ukhuphiswano olomeleleyo kwimakethi ekhulayo yehlabathi. Sizimisele ukusebenzisana nabahlobo bezoshishino abavela ekhaya naphesheya, ukudala ikamva elihle. Wamkelekile kuNdwendwela umzi-mveliso wethu. Ndijonge phambili ukuba nentsebenziswano win-win nawe.
Ngaphambili: I-Bimetal Hole Opener ene-Round Shank kunye noMbala owenziwe ngokwezifiso
Okulandelayo: Isivula sentsimbi esinesantya esiphezulu
I-Titanium-ifakwe i-hexagonal shank eyandisiweyo...
Umngxuma ophakathi kuluhlu olwandisiweyo lokuvula umngxuma wengxubevange